निडर युवतीको रोकिएको यात्रा |
निडर युवतीको रोकिएको यात्रा
प्रकाशित मिति :2020-06-05 18:20:20
‘अब के मैले जीवनभर अदालतको धाइराख्नु ? बुझ्न थालेदेखि अहिलेसम्म मेरो जीवन कानूनी लडाइँमै बित्यो । अब कति ? म थाकि सकें दिदी …।’ धेरै पछि उनीसंग भेट हुँदा उनले मलाई भनेको कुरा यही नै थियो ।
किरण यादव । यो नाम कुनै समय सुनसरी जिल्लामा एक निडर र साहसी युवतीको रुपमा चिनिन्थ्यो । मैले उनलार्ई चिनेको पनि उनले आफ्नो पढाइको लागि आफ्नो परिवारमा गरेको विद्रोहको घटनाबाटै हो । म त्यतिबेला सुरक्षा र न्यायको विटमा रेडियोमा कार्यक्रम चलाउँथे । पढाइको लागि आफ्नो अभिभावकसँग मुद्दा नै गर्न आँट गरेकी किरण मैले भेटेको तीन वर्षमै गलिसकेकी रहिछन् ।
उनी जन्मे, हुर्केको ठाउँ सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिका । सानैदेखि पढाइमा मेहनती र अब्बल थिइन् रे । ९ कक्षामा पढ्दै गर्दा १६ वर्षमै बुवाले विहे गरिदिने कुरा गरेछन् । विहे गर्न अस्वीकार गरे बुवाले पढाइ नै रोकिदिने धम्की दिएछन् । तर जवाफमा उनले आफ्नै बुवाविरुद्ध अंश मुद्दा दर्ता गरिन् । र ५ वर्षको कठिन संघष पछि मुद्दा पनि जितिन् र अंशमा जग्गा पाइन् । मुद्दा लड्दै गर्दा ज्यानै लिनेसम्मका धम्की आए पनि उनी रतिभर डराइनन् । ‘मुद्दा गरेर अंश त पाएँ तर बदलामा परिवार गुमाएँ’ उनले भनेकी थिइन् । बुवा र दाजुभाइ मात्र थिए उनको परिवारमा । आमा त उनले सानैमा गुमाएकी रहिछन् । अंश मुद्दा दर्ता गरेपछि उनलार्ई दाजुभाइहरूले घरबाट निकालिसकेका थिए । त्यसैले उनी नाता पर्ने दाइभाउजूको घरमा बस्थिन् । त्यही घरमा पहिलो पटक कुरा गर्दा दाइभाउजूले मुद्दाको बेला सहयोग गरेको भनेर भनेकी थिइन् । बालविवाहविरुद्ध उनले उठाएको कदमलार्ई मैले सफलताको कथा भनेर रेकर्ड गरिसकेपछि उनले भनिन्, ‘दिदी बुवाले मेरी बिरामी आमालार्ई त्यतिबेला अस्पताल मात्र लगिदिएको भए मेरा आमा बाँचेकै हुन्थिन । आमा भएकी भए सायद म एक्लो हुदैन्थे । तर तपाइसँग चिनजान भएर दिदी पाएँ’ भनेर आत्मियता जोड्दै मलाई विदा गरेकी थिइन् ।
उनको कथा सुनेपछि मैले महिला खबरका लागि किरणको संघर्षको स्टोरी रेकर्ड गर्न पहिलो पटक भेट्दाको दिन मलार्ई अझै सम्झना छ । उनी निकै आत्मविश्वासी थिइन् । उमेरमा म भन्दा सानी भए पनि उनको उत्साह र हिम्मत मेरो भन्दा निकै धेरै थियो । त्यो पछि पनि उनले मलाई प्राय फोन गरिरहन्थिन् । ‘दिदी तपाईं रेडियोमा कति मजाले बोल्नु हुन्छ । तपाईं बोलेको देखेर मेरो आत्म विश्वास बढ्छ’ यस्तै यस्तै कुरा गरिरहन्थिन् । अझ महिला सम्बन्धी रिर्पोट वा वहस कार्यक्रममा उनको निकै चासो हुन्थ्यो । त्यस्तो कार्यक्रम प्रशारण सकिनेवित्तिकै पहिलो फोन उनैको आउँथ्यो । रेडियोकी उनी नियमित श्रोता थिइन् । त्यसैको प्रभावले होला उनको चेतनाको स्तर उनको समुदायका अरु भन्दा भिन्न थियो । घुघटमा अनुहार लुकाएर हिँडने समाजमा हुर्किएकी भए पनि किरणलाई त्यो कुप्रथाले कुनै प्रभाव पारेको थिएन । उनकी दिदीको बालविवाह भएर पाएको दुःख देखेर नै किरण बालविवाहको विरुद्धमा खुलेरै लागेकी थिइन् । किरण मेरो आवाज र व्यक्तित्व खुब मन पर्छ भन्थिन् । खासमा मचाहि उनको व्यक्तित्वबाट असाध्यै प्रभावित थिएँ । म सधैं आफूलार्ई उनको समुदायमा जन्मेको भए ‘के म त्यस्तो गर्न सक्थें ?’ भनेर प्रश्न गर्थें ।
२०७४ सालको शुरुतिर एकदिन बिहानै उनको फोन आयो । त्यो दिन मेरो विहान ड्यूटी नभएकोले घरकै काम गरिरहेकी थिएँ । फोनमा उनको कुरा सुनेर म छक्क परें । उनी साँच्चैकी निकै आटिली थिइन् । जुन समुदायमा छोरी मान्छेले घरबाट बाहिर निस्किदा त अनुमति लिएर जानु पथ्र्यो, त्यही समुदायमा उनले निकै ठूलो आँट गर्न लागेकी थिइन् । देशमा निर्वाचन हुनै लागेको बेला किरण म्यादी प्रहरी बन्छु भनेर कस्सिएर मसँग सल्लाह मागिरहेकी थिइन् । उनको आँटले म फेरि अचम्म परें, त्यो भन्दा केही दिन पहिले मात्र उनको समुदायका थोरै महिलाहरूको मात्र मतदाता नामावलीमा नामदर्ता भनेर समाचार मैले नै बनाएकी थिएँ । त्यही समुदायमा हुर्किएकी उनी निर्वाचनकै लागि म्यादी प्रहरी बन्न तम्सिएकी थिइन् । मैले उनको उत्साहलार्ई कमजोर गर्ने कुरै भएन ।
किरण म्यादी प्रहरी भएको समाचार बनाउने कुरा सोचेर पनि म थप उत्साहित थिएँ । निर्वाचनको मुखैमा उनले एकदिन फोन गरिन् र भेट्न चाहेको सुनाइन् । उनको कुरालाई टार्ने मसँग बहाना थिएन त्यो बेला । खासमा म उनको कुरा टार्न पनि चाहन्न थिएँ । किनभने धेरै कुरा भइरहने हुँदा आत्मियता पनि बढिसकेको थियो । साथै उनी मेरो लागि एउटा समाचार पनि त थिइन् ।
इनरुवा बजारको चियापसलमा म पुग्नु अघि नै उनले खानेकुरा अर्डर गरिसकेकी रहिछिन् । चिया र चाट खाँदै उनले सुनाइन्, ‘दिदी म त म्यादीमा जान सकिन ।’ मैले सोचे सायद उनी छनौटमा परिनन् । मैले उनको कुरा अगाडि नसुन्दै भनें, ‘भनसुन पनि धेरै चल्छ रे, म कोसिस गरौं ?’ त्यति बेला सुरक्षा र न्याय सम्बन्धी कार्यक्रम रेडियोमा चलाउने भएकोले जिल्लाका प्रहरी अधिकृतहरूसंग मेरो चिनजान बाक्लै थियो । मैले भनेको उनीहरूले मान्थे मान्थेनन् थाहा छैन । तर पनि मैले उसलाई भनसुन गर्छु भनेर भनी हाले । किनभने किरणले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गरोस् भन्ने म पनि चाहन्थे ।
तर कारण अर्कै रहेछ । उनी बसेको घरको दाइले म्यादीमा भर्ना हुन नजाउ भनेको कुरा उनले टार्न नसकेको रे । उनले भनिन्, ‘दिदी उनीहरूले मलाई मुद्दा गर्दादेखि नै सहयोग गरिरहेका छन् । मलाई आश्रय दिएका छन् । उनीहरूको भावनालाई मैले कदर गर्नु पर्छ ।’ म उनको कुरा सुनेर खिन्न भएकी थिएँ । उनैले फेरि भनिन्, ‘अरु कुनै अवसर फेरि आउला नि ! हैन त ? उनले आफूभित्रको निरासालाई पुनः आशामा परिणत गरेर जिज्ञासा छोडिन् ।
निरास नहुने, संकटमा पनि सम्भावना खोज्न सक्ने बढो गज्जवको खुबी थियो उनमा । म्यादीमा जान नपाएको मनको गुम्सो पोख्न आएकी थिइन् सायद । किनभने उनको मनको कुरा पोख्ने ठाउँ अन्त कतै थिएन । मसँग त्यही कुरा पोख्न उनी आएकी थिइन् । तर मेरो निन्याउरो अनुहार देखेपछि उनले आफूलाई झन बलियो बनाएर गइन् ।
समय बितेको थाहै भएन । निकै लामो समयदेखि किरणसँग कुरा भएको थिएन । फोन गर्छु गर्छु भन्दा भन्दै समय नै मिलेन । आखिर ‘बुहारी पत्रकार’ न जो परे म पनि । मसँग कुरा गरिराख्ने मान्छेले फोन नगरेपछि एकदिन मैले आफै फोन डायल गरे । उनको फोन अफ थियो । समय मिलेको बेला उनलाई डायल गर्न थाले, फोन अफ नै हुने । मेरो मनमा चिसो पस्न थाल्यो । किरणलाई केही पो भयो कि ! भनेर । तर उनको पत्तो लागेन । कहिल्यै मैले बिर्से हुँला, सम्झेको बेला फोन गर्थें अफ नै आउँने ।
धेरै समय पछि नचिनेको नम्बरबाट आएको फोन भए पनि मैले आवाज चिनें–उनै थिइन् मैले एकै सासमा सबैकुरा सोधें । उनले ‘दिदी मैले त विहे गरे नि !’ पो भनेर सुनाइन् । मलाई एकदमै खुशी लाग्यो । मैले उनलाई बधाइ दिनु अघि नै उनले बधाइ चै नदिनुस् है, भनिन् । मैले अचम्म मानेर किन भने ? उनले खुलाइन्, ‘विहे त गरें तर धोका भयो ।’ म छाँगोबाट खसे जस्तो भए । भगवानले संघर्ष र दुःख जति यही केटीको भाग्यमा लेखेका रहेछन् भन्ने लाग्यो ।
उनले विहेको निर्णय गर्नु परेको कारण पनि सुनाइन् । मुद्दा लड्दादेखि उनले सहयोगी मानेका दाइले उनको सम्पतीमा आँखा लगाएका रहेछन् । मुद्दा जितिसकेपछि किरणलाई दाइभाउजूले मानसिक रुपमा निकै दबाव दिएछन् । मुद्दा लड्न र बस्न दिएको बदलामा केही नपाएको भन्ने बचन सुनेपछि उनले जग्गा बेचेर उनीहरूको मुखमा बुजो लाइदिएकी रहिछन् । उनीहरूको नियत बुझेपछि इनरुवामा डेरामा बस्न थालिन् रे । त्यहीबेला अर्को एकजना दाइ नाता पर्नेले उनको लागि केटा खोजेछन् । प्रहरीमा जागिरे केटोको परिवारसँग दाइको कुरा भएको रहेछ । जीवनमा एक्लो बस्नु भन्दा साथी पाउने आसमा उनी बिहे गर्न सहमत भएकी रहिछन् ।
थप केही जग्गा बेचेर उनले आफ्नो विहेको खर्च जुटाइन् । विहे भएकै रात श्रीमान्को मोबाइलमा एकोहोरो फोन बजिरह्यो । भोलिपल्ट बिहानै श्रीमान् अफिसको कामले काठमाडौं फर्किनु पर्यो भनेर निस्किए । त्यसपछि छ महिनासम्म घर फर्किएनन् । दुइ महिनासम्म किरणको सम्पर्कमै नआएका उनले फोन गरेर आफू निकै बिरामी परेको र उपचारमा धेरै पैसा सकिएको भन्दै पैसा पठाइदिन भने । बिहे गरेर अलपत्र पारेर हिँडेको श्रीमान् बिरामी भन्दा किरणको मनमा माया पलायो । उनले साथमा पैसा नहँुदासमेत गहना धितो राखेर पैंसा पठाइन् । प्रहरीको जागिर यस्तै होला सोचेर चुप बसेकी उनलाई यही बीचमा बुबाले लुकाएको जग्गासमेत आफूले पनि पाउनु पर्छ भन्दै पेश गरेको मुद्दाको तारिखका लागि काठमाडौं जानु पर्ने भो । श्रीमान् काठमाडौंमै भएकोले उ निकै उत्साहका साथ काठमाडौं पुगिन् । तर त्यहाँ उनको जीवनमा दुइटा फैसला भए । एउटा फैसला अदालतले उनका विरुद्धमा गरेछ । अनि अर्कोचाहिँ उनले श्रीमान्संग छुट्टिने फैसला आफै गरेर सुनसरी फर्किछन् । कारण किरणसँग विहे गर्नु अघि नै उनले घरमा नभनेर विहे गरिसकेको रहेछ । पहिलो श्रीमतीबाट बच्चा पनि भइसकेको थाहा पाएपछि उनी निरास भएर सुनसरी फर्किएकी रहिछिन् ।
उनको कुरा सुनिरहेकी म बोल्न सकिरहेकी थिइन । उनले आफ्नो त भाग्य नै यस्तै रहेछ भन्दै पहिलोपटक निरासा सुनाइरहेकी थिइन् । अनि मैले त्यो विहेको कुरा गर्ने दाइको बारेमा सोध्नेवित्तिकै भनिन्, ‘दिदी अहिले फोन राख्छु, दाइको कुरा अर्कोदिन भनौंला ।’
उनले फोन राखिन् । तर मेरो मनमा उनैको कुरा खेलिरहेको थियो । अर्को दिन विहानैदेखि उनको फोनको प्रतिक्षामा थिएँ म । तर पुरै दिन बित्यो, फोन आएन । यही बीचमा कोरानाका कारण लकडाउन शुरू भयो । लकडाउनले केही फुर्सदिलो बनाएकाले उसलाई फोन गर्न खोजें । तर फोन अफ । म दुबिधामा परें उसलाई केही भयो कि ! भनेर । किन भने आफ्नो अधिकारको लागि उ नडराउने केटी हो । उनको नयाँ घर कहाँ पनि थाहा थिएन । सोध्ने अरु कुनै ठाउँ पनि थिएन । उनको कुराले म विचलित भइरहेको थिएँ । सम्पती र सम्बन्धका कारण महिलाले ज्यान नै गुमाएका समाचार धेरै पढेकोले पनि होला । मेरो मन आत्तिएको थियो ।
लकडाउन भएको एक महिनापछि उनले फोन गरिन् । सन्चो बिसन्चो केही नसोधी शुरुमै भनिन्, ‘दिदी म मुद्दा नलड्ने भएँ । मैले उसलाई हिम्मत नहार्न भन्दै उनको आँटिलो विगत सम्झाएँ । तर उनले कुरा मोडिन् । बरु कठोर हुँदै भनिन्, ‘मलाई अब कसैको विश्वास छैन ।’ उनी भक्कानिएर रोइन् । निडर किरण पहिलो पटक मेरो सामु निरास र कमजोर भावमा विगतका सबै कुरा सम्झिदै मात्रै भक्कानिन थालिन् ।
उनले हिम्मत हारेको देखेपछि मैले उनलाई सम्झाउँदै कानूनी उपचार खोज्नु पर्ने कुरा दोहोर्याएँ । आफूले सहयोग गर्ने विश्वास पनि दिलाउन खोजे । तर उनले मुद्दा नलड्ने निर्णय सुनाइन् । मैले उ अन्यायमा परेकोले दोषिले सजाय पाउनै पर्ने कुरा दोहर्याएँ । तर उनले मलिन आवाजमा भनिन्, ‘दिदी मैले जीवनभर अदालत कति धाइराख्नु ? बुझ्ने भएदेखि अहिलेसम्म मेरो जीवन कानूनी लडाइँमै बित्यो ? अब कति ? म थाकि सकें दिदी ।’ उनले फोन राख्दिन्…।
मैले उसलाई सम्झाउन तुरुन्तै फोन गरें तर अफ आयो । धेरै दिनदेखि कोसिस गरिरहेकी छु । तर अहिले उनको फोन अफ नै छ । उनको फोनको प्रतिक्षामा छु । जति दिन बित्दैछ, उती नै मनमा कुरा खेल्छन् । आजकल एउटै कुरा सोचिरा’को छु । १५,१६ वर्षकै उमेरमा परिवारसँग विद्रोह गर्ने, जीवनको हरेक संकटमा पनि अवसर देख्ने उनी किन आज थाकिन् ? उनीमाथि कुनै दवाव र करकाप भएर पो न्याय खोज्न हिच्किचाएकी हुन् कि ! वा एउटी महिला भएकै कारण उनी एक्ली भइन् ?